Ngaba uyazi ukuba uthando, ukunyamekela kunye nokukhanga ngokwenene kuyisifundo sekhempi? Mhlawumbi uvile ngako, kodwa kunzima ukukholelwa, akunjalo? Nangona kunjalo, cinga: kutheni abanye abantu bekhenkcela, kwaye abanye abayithandi? Kwaye, ngokuqhelekileyo, kubonakala kungenanto. Ngamanye amaxesha nokuba indoda enhle kakhulu ayibangeli nantoni na. Kwaye, ngokuchaseneyo, ukungaboni kakuhle kohlobo oluthile ngokukhawuleza luba ngumxholo weengcamango zakho zesondo. Kutheni oku kwenzekayo? Ngaba ndiyakongeza kwinto endikhangayo? Ngoku kukho ubungqina bezenzululwazi obubhenkcekisayo, kwaye yintoni ephikisa abantu. Ziyimfihlo, zifunde - kwaye ubomi bakho buya kutshintsha.
Mhlawumbi awuyi kukholwa, kodwa umnqweno ungeniswe kwiijisi zethu. Ngoko izazinzulu ziqwalasela. Ujonge omnye umntu kwaye unganqwenela ukuba unqwenela ukudlulisela amajeni akhe kubantwana bakho kwikamva. Engonakaliyo? Kodwa oko kwakuphakanyisiwe okokuqala kwaye kuqinisekiswa nguDevend Singh, unjingalwazi wezesayensi kwiYunivesithi yaseTexas. Ngoko ukuba ukhethe umntu ukuba ube ngumlingani wakho, ngoko uyaqonda ukuba izifo zakhe zegciwane ziza kwenza ukuba bakwazi ukuvelisa abantwana abaphilileyo.
Kodwa konke oku kwenzeka ntoni? Ngokwezinzululwazi, sitshintshisa imigaqo yezofuzo ezivela kwiindawo zethu ze-satellites. Kuye kwaziwa ixesha elide ukuba i-pheromones inokubangela ukunyanyiswa kwezesondo kwizilwanyana. Kodwa kude kubekho nje ukukholelwa ukuba abantu balahlekelwa oku. Emva koko ngo-1985, isifundo senziwa ngokubeka iinzwa kumakha omntu. Izixhobo ezixhunyiwe ngqo kwingxenye yengqondo ejongene neemvakalelo, ezifana novuyo, ukudabuka, njl. Ucwaningo lubonise ukuba abafazi bathanda ama-pheromones amadoda anezixhobo zokuzivikela ezifana neyabo. Ngaphezu koko, ukhetho lwenziwa ngokukhawuleza, abantu babengayazi ngaphambili, abazange babonane. Isiphumo satshwankqululwazi. Kuye kwenzeka ukuba senze ukhetho ngokungazi, ngokusekelwe kwiimpawu ezingabonakaliyo, njengoko zininzi izilwanyana. I-Pheromones yikhowudi yomntu ngamnye wethu. Kwaye ngoku bafunde ukuphinda baphinde! Wonke umntu unokuthenga kuphela iipesholo ezikhethekileyo eziqulethe ezi zinto, kwaye uzenzele ukukhanga! Nangona kunjalo, ngelo xesha uphulaphula "ikhowudi eyimfihlo" yakho. Iqabane, i-genetically eyenzelwe wena, akunakukufumanisa.
Kanye nama-pheromones, ukuma komzimba yinto enye esikhokelwa ngayo xa sikhetha iqabane. Kwakhona, ngenyameko. Ifomu kunye nokulinganisa ziquka izinto ezisisiseko zempilo kunye nempilo yemvelo. Ngoko ukuba kukho u-asymmetry ebusweni bakho okanye kwenye indawo emzimbeni wakho, ke oku kuyisitshixo kwiingxaki zemizimba. Oku kuthetha ukuba imilenze ephosakeleyo ayikho nje imilenze ephihliweyo, kodwa uphawu lokuba iizakhi zakho zegesi zingaphulaphulwa. Uxolo, kodwa le ngcamango yoluvo. Uphando olutshanje lubonise ukuba amadoda akhetha ubuso obunqamlekileyo besifazana. Abafazi abaneemilinganiselo zomzimba ezilinganayo banamaqabane amaninzi ezesondo, kwaye babenobomi bobulili obusebenzayo ukususela kwiminyaka engaphambili. Kuye kwaboniswa ukuba amadoda athetha abafazi ngesilinganiselo sesisindo somyinge we-0.7. Unokubala ubungakanani bakho ngokukwahlula inqeni ngokubaluleka kweenyawo zakho. Lo mfanekiso kuthiwa unxulumene ne-subconscious, ngoxa ubunzima bakho abubalulekanga. Ezi ziindaba ezilungileyo kulabo abazama ukunciphisa umzimba. Into ephambili - ubungakanani.
Ezinye iindlela zokukhetha.
Iingcali zenzululwazi ziye zafumanisa ukuba abantu bavame ukukhetha abo bahlobo babo kulabo abazikhumbuzayo ngokwabo. Iprogram yecomputer iye yaphuhliswa ingatshintsha ubuso. Oku kunceda ukwazi ukuba yintoni eyenza ezinye zazo zikhangele ngakumbi kunabanye. Izifundo eziliqela zanikezelwa ukwenza utshintsho kwiifoto zabantu besini esahlukileyo. Oko kukuthi, ukwenza i-ideal, ngemigangatho yabo, umntu. Kwavela ukuba abantu "baqhubela" iifowuni phantsi kwakhe. Iimpawu zabantu "zeengcamango" zazifana nazo. Kuyamangalisa! Abantu bahlala befaka iingcamango zabo malunga nomntu wesini esahlukileyo kunye neenguqu malunga nabo-nokuba bangaziqondi. Iingcali zenzululwazi zibonisa ukuba sibona ubuso bethu bukhangeleka, kuba basikhumbuza ngabazali bethu, ubuso bethu obubonayo rhoqo ebuntwaneni.
Ngaba oku kuthetha ukuba xa sidibana nomntu kufuneka sihlale sikhumbula isayensi? Akunjalo. Kufuneka nje ukuba uqonde ukuba yonke into ebomini ayikho ngengozi, yonke into ibangelwa into ethile. Ukwazi ezi mfihlelo zobuhle kunye nobulili, sinokuchaphazela ubomi bethu. Ngamanye amaxesha usebenzisa iindlela ezongezelelweyo ukutsala iqabane kunye nokumxhaphaza. Emva koko, iimvakalelo eziqaqambileyo, iimvakalelo ezingalibalekiyo zenza ubomi bethu bube nenjongo. Kwaye ke akunandaba, i-chemistry iyonke okanye ayikho.
Iipuzzle zobuqhetseba kwiingcamango ezingaqhelekanga
Indlela yokuxhamla abantu ukuba bafike kum ngeengcebiso?
Uyise kaJeannene Friske ulungele ukuhlawula ukubulala "umkhwenyana ongenakhaya"
Yintoni ongayenza ukuba unayo izinyo ezinqabileyo
Shish kebab evela esibindini sesilwanyana
I-Acne kwiintsana: unyango
Ukunyamekela isikhumba esilumkileyo
Isobho nge turkey